Moa ve ny paikadim-barotra momba ny varotra atiny 2015 manarona ireo fironana ireo? | Martech Zone
Alarobia 28 Janoary 2015 Alarobia 28 Janoary 2015 Douglas Karr
Content Marketing no mitarika ny entana amin'ny fironana marketing nomerika ho an'ny 2015, arahin'i Big Data, Email, Marketing Automation ary Finday. Tsy mahagaga raha hita taratra ao amin'ny maso ivoho izany laharam-pahamehana izany izay namboarinay a Big Data tetikasa novolavolainay ho an'ny mpanonta amin'ny Internet lehibe. Big Data nanjary nilaina tsotra izao noho ny habetsaky ny hafainganana sy ny hafainganan'ny angon-drakitra izay angoninay sy dinihinay haminavinaana sy hitaterana ny zava-bitanay momba ny ezaky ny varotra votoaty.
Ireo orinasa avy amin'ny tsena sy marindrano rehetra dia manao drafitra mivaingana amin'ny fampiroboroboana ny ezaky ny marketing amin'ny atiny, toy ny mpivarotra B2B izay mampitombo ny tetibolan'ny varotra atiny ary mamorona atiny betsaka noho izay efa nataony taloha. Na ireo marika lehibe aza dia miditra amin'ny ady, miaraka amin'ny 69% tsy mitsaha-mitombo ny famokarana atiny ary mbola hanohy hanao izany amin'ny taona 2015. Jomer Gregorio, CJG Digital Marketing
CJG dia namantatra ireo fironana fivarotana votoaty 8 izay mihanaka amin'ny paikady marketing atiny amin'ity taona ity:
Ny marketing amin'ny atiny dia ho bebe kokoa kendrena sy manokana.
Ny marketing amin'ny atiny dia hampiasa bebe kokoa fametrahana karama.
Ny marketing amin'ny atiny dia hampiasa bebe kokoa automation marketing.
Ny marketing amin'ny atiny dia hampiasa bebe kokoa mpanoratra matihanina.
Ny marketing amin'ny atiny dia hifantoka bebe kokoa amin'ny fizarana.
Ny Marketing Marketing dia hanambady media marketing sosialy.
Hiroborobo ny Marketing amin'ny atiny finday-barotra.
Ny Marketing Marketing dia handeha supernova miaraka amin'ny fitantarana an-tsary.
Tags: 2015Content Marketingfironana marketing amin'ny atiny
4 Feb 2015 tamin'ny 6:09 maraina
Ity misy fanazavana tsara momba ny fironana amin'izao fotoana izao amin'ny marketing votoaty. Heveriko fa manampy antsika ireo paikady marketing votoaty valo ireo ary amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe indrindra amin'ny varotra rehetra ireo. Ary koa ny fanehoana info-grafika dia omena tena tsara. Misaotra anao noho ny lahatsoratra tsara!
Apr 13, 2015 amin'ny 9: 21 AM
Tsy isalasalana fa ny votoaty no solika amin'ny tranokalanao ka tsy maintsy azonao antoka fa mampiasa solika kalitao mba hampandeha tsara ny tranokala. Mitovy amin'izany, eto ianao dia nanazava ny lafiny rehetra momba ny varotra votoaty miaraka amin'ny fironana farany.